Aas’aaskii ururka iskaashatooyinka oo loo dabaal degay – Radio Muqdisho
Munaasabadan lagu xusayay 37 guuradii kasoo wareegatay aas,aaskii dhaq_dhaqaaqa iskaashatooyinka dalka ayaa waxaa ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka socotay wasaaradda beeraha, iyo xubno kaleiyadoo intii ay socotayna laga sheekeeyay taariikhda iskaashatooyinka iyo muhiimadooda.
Munaasabada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka iskaashatooyinka Maxamed Muuse Madoowe waxa uuna xusay in iskaashatada looga baahan yahay garab siinta dadka danyarta ah ee Soomaliyeed si loo gaaro yoolka la hiigsanayo.
Sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa ugu baaqday haweenka Soomaaliyeed inay qeyb ka noqdaan iskaashatooyinka.
Ugu dambeyn gudoomiyaha ururka iskaashatooyinka Soomaaliyeed Cali Cabdulle Guure ayaa hambalyo u diray dhamaan iskaashatooyinka Soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena guul weyn ku tilmaamay in dib loo soo nooleeyo ururkii iskaashatooyinka.
Dhalinyaro ka mid noqoneysa ciidanka Badda Galmudug oo tababar loo furay